रबर पार्ट्स, रबर एक्स्ट्रुजेसन, रबर सिलहरू - टियान्जेंग
सेल्फ चिपकने वाला रबर पट्टी
फ्लाकिंग रबर मुहर
एज सुरक्षा सिल स्ट्रिप्स
XingTai TIANZHENG सीलिंग कं, लिमिटेड
Xingtai Tianzheng सील कं, लिमिटेड २०१० मा स्थापित रबर एक्सट्रुज़न उत्पादनहरु को एक पेशेवर निर्माता हो, र Xingtai शहर मा स्थित छ, हेबै प्रान्त चीन, राजधानी बेइजि and र समुद्रीतट Tianjin को नजिकै।
हामीसँग सब भन्दा शक्तिशाली र उन्नत R&D, बिक्री र उत्पादन टोलीहरू छन्, पूर्ण रूपमा १०० भन्दा बढी कर्मचारीहरू। हाम्रो कम्पनीको विशेष टेक्नोलोजीहरू र परिष्कृत उपकरणहरू छन्। EPDM, PVC, VITON, NBR, SILICON र स्पंज स्ट्रिपहरू सहित विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ।
मेकानिकल मोहर स्थापना
मेकानिकल सिल स्थापना मेकानिकल सिलको स्थापना विधि मेकानिकल सीलको प्रकार र मेशिनको प्रकारसँग भिन्न हुन्छ, तर स्थापना आवश्यक प्रायः उस्तै हो। मेकानिकल सिल आधारभूत मीटर मध्ये एक हो ...
रबर मोहर निरीक्षण को ज्ञान
रबर मुहर निरीक्षणको ज्ञान १. रबर मुहरका निरीक्षण वस्तुहरू के के हुन्? १) जाँच गर्नुहोस् कि उत्पादन सफा छ कि छैन। २) जाँच गर्नुहोस् कि उत्पादमा वल्कनेजेशन दोषहरू छन् कि छैन; )) जाँच गर्नुहोस् कि उत्पाद ट्रिमिंग / एड छ ...
रबर मोल्ड गरिएका उत्पादहरू र एक्सट्रुडेड उत्पादनहरू बीच भिन्नता
रबर मोल्ड गरिएका उत्पादनहरू र एक्सट्रुडेड उत्पादनहरू बीच भिन्नता उत्पादन उद्योगको तीव्र विकासको साथ, रबर उत्पादनहरू अधिक र अधिक व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। रबर र प्लास्टिक उत्पादनहरूका लागि जुन कहिँ पनि देख्न सकिन्छ, ...
तपाईं हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ